Yako Kutanga Yako Brand Yakagadzirira CES? Yakakosha Branding Yekutarisa Yekutanga-Nguva | Martech Zone
Chokwadi iwe wanzwa ngano kubva kumberi mitsara uye ukatoteerera yambiro kubva kune vanobatsira shamwari uye vaunoshanda navo. Asi kana iwe uri mumwe wezviuru zvevamabhizimusi vakanyoreswa kuenda kunopenga gore raNdira kupenga kunonyatso kuzivikanwa seCES (Consumer Electronics Show) muLas Vegas kekutanga gore rino (Ndira 9-12th), zvingave zvakaoma kufungidzira zvechokwadi zviri pamberi pako.
Zvakadii neizvi: Fungidzira bhora renhabvu-saizi horo pane horo izere nemamirioni-akapfeka lanyard, mabhizinesi akasarudzika-akapfeka matekihi achidzungaira pakati pezviuru zvematumba nematafura ari kukwikwidza kutariswa pakati pemayhem. Mukati mevanhu vazhinji, zvine ruzha, kuratidzwa kune mavara kubva kumakambani makuru epasirese - funga kuti Sony, Samsung, Ford uye nezvimwe - zvingangokwira pamusoro pesikati, sezvo 87% yevaratidziri kuCES makambani eFortune 100. Zvichakadaro, mazana evamwe anokwenenzvera muzviratidzo pese pese panogona kuona ziso, kubva kuzvitoro zvekugezera kusvika kune vane mukombe wekofi uye zvese zviri pakati.
Kana iwe wakaita senge kutanga kwakawanda, hausi kuzove nebhenefiti hombe bhajeti dumba pane yegungano nzvimbo yepasi (iyo inogona kutenga kumusoro kwe $ 50K ye10 × 10 dumba). Kana iwe uri mutsva wekutanga uine bhajeti rakaomarara, unogona kufunga imwe inodhura imwe nzira senge Eureka Park - nzvimbo yakatsaurirwa kunyanya kutanga-up, tafura pane imwe yehusiku midhiya inoratidza se Showstoppers, kana kunyangwe kungochengetera imwe hotera iri padyo nenzvimbo yemusangano.
Nekudaro, izvo zvaunogona - uye zvaunofanirwa - kuita padiki kuita shuwa kuti chiratidzo chaunofanira kuratidza kana uchinge wasangana nechero munhu ipapo, kungave mune dumba, patafura kana kungopfuura pachiratidziro pasi, chinopa chakanyanya kunaka zvinogoneka.
Pazasi pane asina-mapfupa, yakakosha yekutarisa kuti uone kuti kambani yekambani yako yakagadzirira kusangana nevazhinji kuCES gore rino.
Hauna kunanga kupenga kunonzi CES? Mazhinji emazano ari pazasi anoshanda kune angangoita chero makuru maindasitiri tradeshowako kambani yako ichave ichienda gore rino. Sezvo isu tese tichiziva, kuratidza kana kunyange kungoenda kunetiweki tradeshow chiitiko chinodhura, saka zvinongonzwisisika kukwidziridza huvepo hwako nekuisa rako rakanakisa rekodhi tsoka tsoka.
Zvinogara zvichishandiswa zvinhu kubva pane yako logo pazasi - Ita shuwa kuti iwe une hunyanzvi, yakanakisa logo uye marangi mirayiridzo iyo inogona kuchinjika kune yega chidimbu chechibatiso, nguvo, uye masaini iwe aunoda kugadzira. Iyo tsika logo yakagadzirirwa kukwana huwandu hwekushandisa kunobatsira yako brand kumira, kunyangwe pachiitiko senge CES.
Yakakwana yemazuva ano, yakadzika dhizaini logo yezvakawanda zvinoshandiswa. Logo dhizaini neblancetnoire yeMari Jar.
Gadziridza kuvepo kwako pamhepo - Usati waenda paVegas, ita shuwa kuti webhusaiti yako iri-ku-dheti (chaiyo uye yazvino ruzivo rwekufambidzana, kamuri yekudhinda ine kufukidza kwazvino uye kuburitswa kwemapepanhau, nezvimwewo) uye zvakanyanya kukosha, nhare-inoteerera. Iri izano rakanaka rekuona kuti nzira dzako dzemagariro dzakagadziridzwa uye kuti mumwe munhu pa-saiti ari kuongorora kudyidzana muvhiki rese.
Kana iwe uri kutengesa chazvino, chigadzirwa chitsva, ita shuwa kuti webhusaiti yako yazvino uye inoteerera. Webhusaiti dhizaini naDenise M.
Tafura kana Booth Signage uye Handouts - Kana iwe uchironga kuratidzira zvigadzirwa kana masampula patafura yako, funga kugadzira mamwe madiki masheni ekuti vatungamire vateereri vatarise kwavari. Iwe une beta vhezheni yechigadzirwa chako kune vanoenda kuti vaedze? Sanganisira iwo ruzivo pano. Unoda kupa vanopinda promo kodhi? Chengetera mune yakashongedzwa-mavara mana-kadhi kadhi yemidhiya nevamwe kutora kubva kune yako dumba kuti usarasikirwe nemutungamiri iwoyo.
Signage - Kana zvasvika pakusaina, ita chokwadi chekudzidza zviyero zvaunofanira kushanda nazvo patafura chaiyo kana dumba rawakachengetera. Zvichida urikushanda nenzvimbo diki kwazvo uye hauzove nemadziro ekumisikidza chikwangwani. Izvi zvinoreva kuti iwe unozofanirwa kutsvaga mahara-akamira mireza. Zvimwe zvinokwanisika masosi eizvi: Zviratidzo Zvinokurumidza uye Anoratidza2go. Paunenge uchigadzira chako chikwangwani, ramba chishuwo chekusvina kukosha kwese kwekambani yako munzvimbo inodhindwa sezvaungaita; logo yako uye yakapfava, isingakanganwike tagline inoverengwa kubva kure inoshanda zvakanyanya.
Zvipo - Kupa zvipo mukana wako wekugadzira. Funga izvo zvinoda vanhu uye zvavanoda zvakanyanya pamhando idzi dzezviitiko. Iyo haifanire kuve yakangwara zvine hungwaru - iwe unozorangarirwa zvakanyanya nekupa chimwe chinhu chakakosha uye kufunga kwezvinodiwa nemushandisi pakutanga. Funga mweya wekufema, mabhegi ekutakura swag, kana notepads. Kunze kwenguva? Iwe haugone kukanganisa zvihwitsi senge yekukwevera kune yako dumba.
Vhidhiyo vhidhiyo - Kana iwe ukafunga kuve nevhidhiyo yekuratidzira pane yako dumba, iwe unozoda chimwe chinhu chinokwezva kutarisisa kwevanhu uye chisingavimbike pane odhiyo (nekuti ingangove ichanyanya kurira kwazvo muhoro). Vhidhiyo yako inofanira kukwanisa kumira yega kuburikidza neanoonekwa uye zvinyorwa. Apa ndipo pausingafanire kutya kuve nehunyanzvi - zvese ndezve kutsvaga nzira nyowani dzekukwezva kutarisisa kutanga hurukuro.
Chipfeko - Pashoma, tarisa kutarisa nyanzvi uye yakashongedzwa. Kana iwe uchikwanisa kugadzirira kuenzanirana, yakashongedzwa tshirts kana polo shati kune yako dumba vashandi, ita saizvozvo. Izvi zvinongozoita kuti ruzivo pamwe neako mhando riwedzere kufona-mukati uye risingakanganike.
Dhijitari Midhiya Kit - Isa pamwechete yako yedhijitari midhiya kit. Iwe unoda kuti ive yakagadzirira vatapi venhau saka havafanirwe kumirira uye iwe usarasikirwe chero mikana. Inofanira kusanganisira ruzivo rwekambani, rako bhizinesi kadhi, zvigadzirwa zvigadzirwa uye ruzivo, marogo, mifananidzo, ruzivo rwekuonana, uye chero chinhu chipi zvacho chaunofunga kuti mutori venhau angangoda. Ipfungwa yakangwara kuti zvese izvi zviwanikwe pamhepo uye kusanganisira chinongedzo cheiyi kititi yekudhinda pane rako bhizinesi kadhi.
Business Cards - Isu tinoziva, tinoziva… inguva ya2017 uye tichiri kutaura nezve makadhi ebhizinesi. Asi pazviitiko zvakaita seCES, ichi chinoratidzika sechinyakare chiratidzo kubva kunguva yakapfuura inogona kuve iri nzira yakanakisa yekuyeuchidza mitsva yekudyidzana kuti ubatanidze mushure mechiitiko (uye nekukurumidza kukanda rako bhizinesi kadhi mune rekudzokesa bhaini). Uine izvi mupfungwa, funga kumisikidza yako pamberi pashoo, uye ita shuwa kuti munhu wese anopinda akamirira kambani yako ane zvakawanda zvekupa. Ive neshuwa yekusiira imwe chena nzvimbo pakadhi kuti iye anogamuchira azvinyorere katsamba mushure memusangano wako - pamwe nemitsara ye "usakanganwa kutumira email munhu uyu!"
Unusual rakapetwa, matchbox dhizaini kadhi bhizinesi rinoyeuchidza chero munhu nezveako brand uye bhizinesi. Kadhi rebhizinesi dhizaini naPlatinum78 yeDais.
Kuzvisunga Tese Pamwe
CES mukana wegoridhe weinenge chero chero yevatengi tekinoroji brand, nekuti akawanda mabrands mune ino chikamu ane yakasimba kuvapo ipapo. Nyatsoshandisa mukana iwoyo nekunyatsogadzirira chiitiko ichi. Iwe haugone chete kuwana zvakawanda kubva kuCES, iwe zvakare unonakidzwa nemusangano zvakanyanya.
Tags: 2017chipfekomabhejibranding zvinhumabhizinesi makadhithesecollateralkupadigital media kiteureka pakigiveawayslogochirongo chemarimarijarNhamba yeNew Websitewebhusaiti yewebhuanoratidzazvikwangwanitafura yezviratidzotech webhusaitivhidhiyo vhidhiyoWebsiteshanda